ရန်ကုန်- စစ်တွေ ကားလမ်း၌ တပ်မတော် ထောက်ပံ့ရေးယာဉ်များ ဖြတ်သန်းစဉ် မိုင်းသုံးလုံး ပေါက်ကွဲခ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်- စစ်တွေ ကားလမ်း၌ တပ်မတော် ထောက်ပံ့ရေးယာဉ်များ ဖြတ်သန်းစဉ် မိုင်းသုံးလုံး ပေါက်ကွဲခ?
ရန်ကုန်- စစ်တွေကားလမ်း၌ တပ်မတော်ထောက်ပံ့ရေး မော်တော်ယာဉ် ၃ စီး ဖြတ်သန်းလာစဉ် ရန်ကုန်- စစ်တွေကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၈၄/၄အနီးအရောက်တွင် မိုင်းသုံးလုံးပေါက်ကွဲခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်သော သတင်းအရသိရသည်။
တပ်မတော်ထောက်ပံ့ရေး မော်တော်ယာဉ် ၃ စီးသည် မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ကမ်းနီမှ ဆေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ထွက်ခွာလာစဉ် မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ဖားပျော်(ချင်းရွာ) ၏ အနောက်ဖက် ၁ မိုင်ခန့်အကွာ ရန်ကုန်- စစ်တွေကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၈၄/၄ နှင့် ၎င်းအနီးရှိ အုတ်ခုံ တံတားအရောက်တွင် အဆိုပါ မိုင်းသုံးလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မိုင်းပေါက်ကွဲကြောင့် ဒေါင်ဖန်းယာဉ် ၁ စီးနှင့် ဖောကားယာဉ် ၂ စီးတို့တွင် ရှေ့လေကာမှန် မိုင်းအစ ၁၂ ချက်ခန့် ထိမှန်အက်ကွဲခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် ကိုယ်ထည်များ ပေါက်ထွက်ခြင်း၊ လေကာမှန်ကွဲခြင်း၊ ရှေ့တံခါးမှန် ၂ ချပ် ပျက်စီးခြင်း၊ မိုင်းအစ အချက် ၃၀ ခန့် ထိမှန်ခဲ့ကာ ဘယ်ဘက် နောက်ဘီးပေါက်ပြီး နောက်ကြည့်မှန်များ မိုင်းများ ထိမှန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မော်တော်ယာဉ် ၃ စီး ပေါ် လိုက်ပါလာကြသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
ငွေကျပ်သိန်း (၆ဝဝ) ခန့် တန်ဖိုးရှိ ဆိုင်ရာနိုက် ဓါတုပစ္စည်းများ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၌ ဖမ်းဆီ